တရုတ် အရည်အသွေးမြင့် မော်တော်ကား အာရုံခံ တိကျမှု စက်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်သူ - AMIDI
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ CNC တိကျမှုစက်စက်နယ်ပယ်ကို အာရုံစိုက်ပြီး၊ လုပ်ဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုး၊ စမ်းသပ်ကိရိယာများ ပြီးပြည့်စုံသည်၊ မော်တော်ကားအာရုံခံခြင်း တိကျစွာစက်စက်၊ ကုမ္ပဏီတွင် တူးဖော်ခြင်းနှင့် ခြစ်စက်အသစ်၊ လမ်းလျှောက်ဝိုင်ယာကြိုး၊ ဝါယာကြိုးလမ်းလျှောက်ခြင်း၊ 2.5 D ရုပ်ပုံကြည့်ရှုသူ၊ သုံးယွမ်၊ ပရိုဂျက်တာများနှင့် အခြားသော ကိန်းဂဏာန်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် စမ်းသပ်ကိရိယာများ၊ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် တိကျမှုတို့မှ ထုတ်ကုန်များသည် အလွန်မြင့်မားပြီး တန်ဖိုးကြီးဖောက်သည်များ၏ တောင်းဆိုမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ 3C၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်၊ မော်တော်ကား၊ ရုံးနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်သော ထုတ်ကုန်များ။ မြေပုံ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းမှ ကြိုဆိုပါတယ်။
1. မော်တော်ယာဥ်အာရုံခံ တိကျမှု စက်ယန္တရားစက်၏ ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
မော်တော်ယာဥ်အာရုံခံ တိကျမှု စက်ကိရိယာ
2. ထုတ်ကုန်အင်္ဂါရပ်နှင့် မော်တော်ယာဥ်အာရုံခံ တိကျမှု စက်ကိရိယာအသုံးပြုမှု
3. Automotive sensing precision machining ၏ ထုတ်ကုန်အသေးစိတ်
4. Automotive sensing precision machining ကို ပို့ဆောင်ခြင်း၊ ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
hot Tags:: မော်တော်ကား အာရုံခံ တိကျမှု ပြုပြင်ခြင်း၊ ဝယ်ရန်၊ စိတ်ကြိုက်၊ တရုတ်၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ စျေးသက်သာသော၊ စျေးနှုန်းသက်သာသော၊ ကိုးကားချက်၊ အရည်အသွေး၊ အဆင့်မြင့်